बधाई ! अन्तिम ओभरमा करणले १७ रन बनाएपछि नेदरल्याण्डबिरुद्ध नेपालको चमत्कारी जित - सुदुरपश्चिम खबर
बधाई ! अन्तिम ओभरमा करणले १७ रन बनाएपछि नेदरल्याण्डबिरुद्ध नेपालको चमत्कारी जित
सुदुरपश्चिम खबर	 प्रकाशित : आश्विन २० - २०७६ 160
काठमाडौं । पाँच देश सम्मिलित टी-२० क्रिकेट शृङ्खलाकाे आफ्नाे दाेस्राे खेलमा नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई ४ विकेटले हराएकाे छ। नेदरल्याण्ड्सले दिएकाे १३३ रनकाे लक्ष्य नेपालले १ बल बाँकी छँदै भेट्टाएकाे हाे । शेन स्नाटरको बलमा निरन्तर बाउन्ड्री प्रहार गरेका केसीले नेपाललाई जिताएका हुन् । योसँगै ओमानमा जारी पाँच राष्ट्र सम्मिलित टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरीजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले जितेको हो ।
नेपाली टिमका लागि कप्तान पारस खड्काले ४१ बलबाट सर्वाधिक ३३ रनको योगदान गरे । यसैगरी विनोद भण्डारीले २२ बलबाट २६ रन बनाए । करन केसीले १४ बलमा बिस्फोटक ब्याटिङ गर्दै १४ बलमा ३१ रन जोडे ।
यसअघि सुरुवाती विष्फोटक ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्डले १९.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १३३ रन बनायो । नेदरल्यान्डका लागि म्याक्स ओडडले सर्वाधिक ४३ रन जोडे। उनले ४४ बल खेल्दै ४ चौकाको मद्दतमा ४३ रन जोडेका हुन्। त्यस्तै कोलिन एकरम्यानले २९ रन बनाए।
नेपालका लागि करन केसीले ३.३ ओभरमा १७ रन खर्चेर ४ विकेट, सन्दिप लामिछानेले चार ओभरमा २० रन खर्चेर सर्वाधिक ४ विकेट तथा ललित नारायण राजवंशीले एक विकेट लिए ।
भुटानी राजाले भने: ‘मेरो जन्मस्थान नेपाल भएकोले भावनात्मक सम्वन्ध छ’
नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री जो साइकल चढेरै कार्यालय आउँछन
एनआरएन अध्यक्षमा पन्त विजयी, महासचिवमा डा. हेमराज
सन्दीप लामिछाने एकैदिन दुई प्रतियोगितामा अनुबन्ध, मूल्य करिब दुई करोड
सुदूरपश्चिमलाई मौकाः विनोद भण्डारी बन्न सक्छन् राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान